တောင်အာဖရိက ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်ဂျော့ဘ်, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်အကြံဥာဏ်အကြံပေးချက်များနှင့်-bits။ အမှန်တကယ်, တောင်အာဖရိကမှာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကို get မှလွယ်ကူသောမရှိကြပေ။ သို့သော်ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီနေ့လယ်စာအထူးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးများအတွက်အလွန်ထူးခြားတဲ့ဝန်ဆောင်မှု။ ယခုကြှနျုပျတို့တောင်အာဖရိကသို့ပြောင်းရွှေ့နေကြသည်။ ထိုအကျွန်ုပ်တို့သည်ဒူဘိုင်းသို့ပြောင်းရွှေ့ခံရဖို့သင်ကူညီနိုင်သည်ကိုဝမျးမွောကျကွသညျ။ သင်၏အသက်တာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွေ့အကြုံကိုသည်ငါတို့အဘို့အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ နှင့်ဒါ့အပြင်, သငျသညျအရှေ့အလယ်ပိုင်းအတွေ့အကြုံရှိပါက ငါတို့သည်သင်တို့ထံမှနားထောငျခစျြ !.
အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်တောင်အာဖရိက၌အလွန်ဆိုးရွားဗီဇာဖြစ်စဉ်များ။ ရိုးရှင်းစွာအတိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်ရာမှနိုင်ငံခြားအလုပ်သမားတားမြစ်ထိုတရားဖေါ်ပြခြင်း။ သင်တောင်အာဖရိကမှာရောက်ရှိမတိုင်မီအလုပ်ခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့အခွအေနမြေိုး, အလုပ်ကျွမ်းကျင်သူများရှာဖွေနေ တောင်အာဖရိကမှာခက်ခဲပြီးနီးပါးမဖြစ်နိုင်ဘူး။ သို့သော်ငြားလည်း ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများ သေချာတောင်အာဖရိကကိုငှားရမ်းသည်။ အလုပ်ရှာသူတိုင်းလုပ်နိုင်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင် CV ကိုပေးပို့.
သင်သိသင့်ပါတယ်ဤမျှလောက်များစွာသောအမှုအရာရှိပါတယ် တောင်အာဖရိကနှင့် ပတ်သက်.။ သငျသညျယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာနေသူတစ်ဦးကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ကြသည်အထူးသဖြင့်ပါ။ အဆိုပါတောင်အာဖရိကများမှာ ဒူဘိုင်းအတွက်ကြိုဆိုထက်ပို။ သူတို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတွေနိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံများအများကြီးရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကောင်းသောပညာရေးနှင့်အလွန်အမင်းအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များရှိခြင်း။ ဒူဘိုင်းမြို့ဟာဖြစ်ပါတယ် နိုင်ငံခြားအလုပ်နေရာလွတ်ဘို့အကောင်းဆုံးနေရာ။ သင်စိတ်ဝင်စားလျှင်ဒါ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီဖို့ဒီနေရာကိုဖြစ်ကြသည်။
ဥပမာအားဖြင့်, အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းအာဖရိကမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ကြသည်။ ဒူဘိုင်းအတွက်အခြားတစ်ဖက်တွင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူများအတွက်ကြီးမားတဲ့စျေးကွက်လည်းမရှိ။ ကွောငျ့ ပြည်တော်ပြန်များအတွက်ယူအေအီးအစိုးရအရံရာအရပျ။ အဆိုပါ Semi-ကျွမ်းကျင်ခြင်းနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောလုပ်သားများကိုအလွယ်တကူရောက်လာခြင်းနှင့်တိုင်းပြည်အတွက်အလုပ်ရှာဖွေလို့ရပါတယ်။ အများဆုံးအစိတ်အပိုင်း၏အများစုများအတွက် ဒူဘိုင်းအလုပ်ရှင်များနှင့်ငှားရမ်းမန်နေဂျာ ဒူဘိုင်းအတွက်တောင်အာဖရိကငှားရမ်းဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့ဦးစားပေးရှိသည်။
ဤအကြောင်းကြောင့်, တောင်အာဖရိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူများကဤအတားအဆီးန်းကျင်နည်းလမ်းတွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကယခုရှာဖွေနေကြပါတယ် ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအတွက်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေသူများကိုကူညီနေပါသည် ဒူဘိုင်းသို့ပြောင်းရွှေ့ပါ အာဖရိကမှမြို့။ ရေရှည်တွင်, ယူအေအီးဟာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းများအတွက်အများကြီးပိုကောင်းနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
အဆိုပါကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဒူဘိုင်းအတွက်တာဝန်ခံအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီများသည်ယခုငှားရမ်းနေကြ။ ထိုမှတပါး, ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးစက်မှုလုပ်ငန်းကြီးမားဝင်ငွေထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကြီးထွားလာလျက်ရှိသည်။ နယူးရှည်လျားသောကန်ထရိုက်များအတွက်ဒေသခံစီမံကိန်းများကိုမန်နေဂျာရှာဖွေနေတက်စတင်သည်။
သငျသညျအတိုငျပငျခံနေရာလွတ်များနှင့် Chartered များအတွက်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ် အဘူဒါဘီအတွက်စာရင်းကိုင်ရာထူး။ တူညီသောလက္ခဏာသက်သေအသုံးပြုပုံကြီးထွားလာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစျေးကွက်အကြားမှာလည်းရှိပါတယ် အများအားအိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်အနေဖြင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားများကဖြည့်အခန်းကဏ္ဍ။ ဒူဘိုင်းအတွက်တောင်အာဖရိကဂျော့မှာ google သုတေသနအတွက်အဓိကခေါင်းစဉ်ကြောင်းကိုမေ့လျော့မနေပါနဲ့။
ယောဘသည်အတွက်ရှာဖွေနေ ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများလူသိများကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဖြစ်လာ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, တောင်အာဖရိကအစိုးရသောအရပ်အနည်းငယ်ကောင်းသောစနစ်များထဲသို့သွင်းထားခဲ့ပါသည်။ ထိုအခါသူတို့ကိုအများစုဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်။ တောင်အာဖရိကများအတွက် Accelerator နှင့် Shared ကြီးထွား Initiative ဥပမာ။ ဒါဟာယေဘုယျလူဦးရေအသုံးပြုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးကိုစနစ်များတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ယခုအချိန်တွင်အာဖရိကအစိုးရသည်နိုင်ငံ၏သေချာ စီးပွားရေးကိုကြီးထွားဖို့ဆက်လက် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း။
ဒါကြောင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသုတေသနအတွက်အဓိကခြားနားချက်တည်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, တောင်အာဖရိကမှာပြည်တော်ပြန်များအတွက်အစီအစဉ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် ကျွမ်းကျင်နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားလိုအပ်ပါတယ် တရားဝင်အရည်အချင်းများနှင့်အတူ။ တစ်ချိန်တည်း, သုံးနှစ် '' လက်တွေ့ကျတဲ့အလုပ်လုပ်တစ်နိမ့်ဆုံးမှာ အတှေ့အကွုံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်။ အခြေခံအားဖြင့်ကိုယ့် key ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဧရိယာများတွင်စုဆောင်းခံရဖို့။
ဒီတောင်အာဖရိကမှာနေတဲ့အလုပ်အကိုင်အဘို့သင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်ပေးဖို့စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့, သငျသညျပိုပြီးအတွေ့အကြုံရှိသည်ဖို့လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သငျသညျကိုအမေရိကန်, ကနေဒါသို့မဟုတ်ဥရောပ၌သင်တို့၏လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံကိုတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ အလုပ်သို့မဟုတ်အခြားနေရာများတွင်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာဖြစ်လာဘို့ယူအေအီးနှင့်အတူအခြားတစ်ဖက်တွင်။ သင်ရုံအနိမ့်အတှေ့အကွုံတာဝန်များကိုလျှောက်ထားခြင်းနှင့်ရနိုင်သည်။ နှင့်တဖြည်းဖြည်း ဒူဘိုင်း၌သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကို.
ဒူဘိုင်းအတွက်တောင်အာဖရိကဂျော့ဘ် လန်းစပြုပြီအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကတည်းကအလွန်ရေပန်းစားဖြစ်လာ။ တောင်အာဖရိကမှာရှိတဲ့အစိုးရအရှေ့အလယ်ပိုင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အလွန်နီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ကိုင်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သင်လုပ်နိုင်သည် ဒူဘိုင်းအတွက်အရေးပေါ်အလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေ။ ဒါကြောင့်သင်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အအကြောင်းကိုသိပ်စိတ်ပူစရာမလိုအပ်ပါဘူး။
အာဖရိကအတွက်ရှာဖွေနေအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏ရည်ရွယ်ချက်, သင်အနည်းငယ်သောအရာတို့ကိုအာရုံစိုက်သင့်ပါတယ်။ အဆိုပါ no.1 သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံကိုဖြစ်ပါတယ်။ အခြား သော့ချက်အချက်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခါနောက်ဆုံးခက်ခဲတဲ့သကဲ့သို့သင်တို့ငွေရှာဖို့ကိုသုံးနိုင်သည်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ, သငျသညျအိမ်မှာသင်၏အွန်လိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးစတင်နိုင်ပါတယ် နည်းလမ်းတွေထဲကတစ်အရေအတွက်။ သင်ပင်တောင်အာဖရိကမှာနေထိုင်ပြီးအဘူဒါဘီတွင်အွန်လိုင်းအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းအလုပ်အကိုင်များ, အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကမ်ဘာပျေါတှငျမညျသညျ့အရပျမှလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
အကောင်းဆုံးကိုတည်ရာအရပ်တစ်ခုမှာအလုပ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာ profile များကိုဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ကအကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း စော်ဘွားလေကြောင်းလိုင်းပေါ်မှာရှာဖွေသင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်စတင်အမှတ် ဥပမာက်ဘ်ဆိုက်။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားရန်, သင်ကောင်းတစ်ဦးစုဆောင်းမှုအေဂျင်စီရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒီအတွက်ကြောင့်, သငျသညျလူအင်အားက်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်, Randstad နှင့်အခြားဆက်စပ်ငှားရမ်းနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများ။
ရေရှည်မှာခုနှစ်, သငျသညျဆိုပါက သင်တို့အဘို့အလုပ်မလုပ်ချင်ပါတယ်တဲ့အထူးသဖြင့်ကုမ္ပဏီတို။ သို့မဟုတ်ပင်သင်စိတ်ဝင်စားစုဆောင်းမှုအေဂျင်စီရှိသည်။ အဘယ်သူသည်သင်အွန်လိုင်းအလုပ်နေရာလွတ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြောသူတို့ကိုတစ်ဦးပေးပို့ခြင်းစဉ်းစားပါ ကျေးဇူးပြု. မိုဘိုင်းကျော်အလွန်သိကောင်းစရာများအလုပ်အကိုင်အလျှောက်လွှာ။ သင်သည်သင်၏အလုပ်အကိုင်အဆင့်အတန်းနှင့် ပတ်သက်. သင်သည်တတ်နိုင်သလောက်သတင်းအချက်အလက်တွေကဆက်ပြောသည်ရှိသည်ဟုသေချာအောင်လုပ်ပါ။
အဘူဒါဘီမှ Gauteng အတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အနေရာပြောင်းရွှေ့
ယခုအချိန်တွင်ကျွမ်းကျင်သူများယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အဘို့ရှာဖွေ။ မှတ်ချက်ချခဲ့ပြီးအဖြစ် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းပိုကောင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေနေကလူ။ Gauteng တောင်အာဖရိက၏မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤမြို့၌နေထိုင်နေကြနီးပါးသန်းနဲ့ချီတဲ့တောင်အာဖရိကရှိပါတယ်။ ဒီစီးတီးအနေဖြင့်လူဦးရေရဲ့နီးပါး 5% အဘူဒါဘီတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်စတင်ရန်ချစ်ကြလိမ့်မည်။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသုတေသနပြုယခုအချိန်တွင်ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများ Gauteng ၌တည်၏။ ထိုအခါစိစစ်အတည်ပြုဘူဒါဘီမှသူတို့ကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးနောက်။
အဘူဒါဘီကုမ္ပဏီများမှစိတ်ဝင်စားသောအဓိကကဏ္ဍ။ အိုင်တီကဏ္ဍ, လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်နှင့်အင်ဂျင်နီယာဌာနဖြစ်ကြသည်။ အလွန်အကျွံမဟုတ် အရောင်းလက်ထောက်သို့မဟုတ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဌာနများအတွက်။ အဘူဒါဘီကုမ္ပဏီများမှသစ်ကိုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများအတွက်ထလို့ပဲ။ နောက်ဆုံးတော့အသစ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း အဘူဒါဘီ၌အသစ်သောအလုပျသမားဖြစ်လာ။ အဆိုပါ Gauteng ale လူဦးရေ၏စည်းကမ်းချက်များ၌တောင်အာဖရိကရှိ 1st ဖြစ်ပါတယ်။ ဤမြို့မှအလုပ်အကိုင်အပလီကေးရှင်းတွေအများကြီးလက်ခံရရှိဒီတော့အဘူဒါဘီဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသနအပေါ်အခြေစိုက်စခန်းစုစုပေါင်းနီးပါး 25% တောင်အာဖရိက လူဦးရေ။ ကိုလိုက်ရှာသည် က Pretoria နှင့် Gauteng အတွက်ဂျော့ဘ်။ ရှိပါတယ် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာကောလာဟလအဘူဒါဘီကြောင့် Gauteng နှင့်အတူသစ်ကိုစီမံကိန်းကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း။ ထိုအတောအတွင်းမှာတော့ဤအရပ်ကိုလည်းအလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားလာပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့။ ဒူဘိုင်းအတွက်တောင်အာဖရိကဂျော့ဘ်များအတွက်သိကောင်းစရာများနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများလျှောက်ထားသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာဒီအတွေ့အကြုံရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလူဦးရေ အဆိုပါ 333 နှင့် 1996 အကြား 2019% ကျော်၏တိုးတက်မှုနှုန်း။ ဒါကြောင့်ဆန့်ကျင်ပေါ်, ပြည်တော်ပြန်တွေအများကြီးတစ်ဦးရှိပါတယ် အလုပ်အကိုင်အစတင်ရန်ကောင်းသောအခွင့်အလမ်း Gauteng မှအဘူဒါဘီမှရွှေ့။ တောင်အာဖရိကတွင်အကြီးဆုံးလူဦးရေပြည်နယ်၏ဘာမျှမပြောပါရန်။ သော်လည်းအသေးဆုံးဧရိယာဒါယူအေအီးအတွက်အဘူဒါဘီနဲ့တူလှပါတယ်။
တစ်ဦးချင်းစီဒါဗန်အလုပ်လုပ်ချင်ပါတယ်ကြောင့်အခြားသောအရပ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဒူဘိုင်းအတွက်တောင်အာဖရိကဂျော့ဝေးဇာတိမြေကနေဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့် သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မြို့ကြီးများအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေကလူ ထိုကဲ့သို့သောဒါဗန်အဖြစ်။ သငျသညျဒါဗန်အချို့စိတ်ဝင်စားဖို့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေလည်းကြိုးစားနိုင်ပါ။ ဤအကြောင်းကြောင့်, တောင်အာဖရိကအလုပ်အကိုင်များနှင့်အပြောင်းအရွေ့နှင့်ပတ်သက်ပြီးအချို့သုတေသနလုပ်ပါ။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားစေရန်, ဒါဗန်အဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ် ဒူဘိုင်းအဖြစ်ကျော်ကြားသော။ တောင်အာဖရိကမှာအလုပ်အများဆုံးဆိပ်ကမ်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အလာပြီတစ်နည်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါဗန်ကိုလည်းခရီးသွားလုပ်ငန်း၏အဓိကစင်တာများတဦးအဖြစ်ရှုမြင်ကြောင်းအဆုံးရန်။ ဒါကြောင့် ပြည်တော်ပြန် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မြို့တော်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဒူဘိုင်းအတွက်တောင်အာဖရိကဂျော့ရှာဖွေနေ။ သို့သော်ကိုအောကျမေ့ရမည်ဖြစ်သည် သာယူအေအီးပူ။ ဥပမာအားဖြင့်, ဒါဗန်စီးတီးနွေးသည်နှင့်ကျယ်ပြန့်ကမ်းခြေနဲ့နွေးသမရာသီဥတုရှိသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, သင်လုပ်နိုင်သည် ဟိုတယ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့ အဲဒီမှာ။ မေလ 2015 အတွက်သရုပ်ဖော်ပုံအဖြစ်, ဒါဗန်မြို့တရားဝင် New7Wonders မြို့ကြီးများတစ်ဦးအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရသည်။ ဒါကြောင့်ထက်မြက်တဲ့ဖြစ်ပါသည် စိတ်ကူးအလုပ်လုပ်စတင်ရန် ဤမြို့၌။
တဦးတည်းအရာများအတွက်, ဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်။ ကာလ၌ရှိသကဲ့သို့ဤမြို့၌စီးသောဘဝ စော်ဘွားအတွက်သာမန်မြို့။ ဒါကြောင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများ၏ပုံမှန်ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီဖွဲ့စည်းပုံမှာအောက်ပါအခြားသောလမ်းထားရန်။ ဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ် 12.6 သန်းလူဦးရေရှိတယ်။ ထိုအရပ်မှ 8% ကျော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကြံထက်အတွေ့အကြုံအားရှိပါတယ်။ လူဦးရေရဲ့အများစုဖြစ်ပါသည် ကောင်းစွာ-paid အလုပ်အကိုင်များရှာဖွေ။ ထိုမြို့သူမြို့သားကျိန်းသေတောင်အာဖရိကမှာအလုပ်မလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ်နေရာကောင်းတခုဖြစ်တယ်, ဤမျှလောက်များစွာသောရှိပါတယ် အလုပ်အဆင်သင့် MBA ဘွဲ့ရပညာရေးနှင့်အတူအတွေ့အကြုံရှိကလူ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ပြည်တော်ပြန်အများစုယူအေအီးမှရွေ့လျား။ ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့တောင်အာဖရိကအလုပ်အကိုင်များအလုပ်အကိုင်များရှာဖွေသူများအကြားစူပါလူကြိုက်များကြသည်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, ကျွန်တော်တို့ဟာနိုင်သကဲ့သို့လူများစွာကကူညီဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ အထူးသဖြင့်ဂျိုဟန်နက်စ်ဘတ်အတွက်အလုပ်ရှာလို, ပြီးတော့တောင်အာဖရိကထံမှထွက်ရွှေ့မယ်လို့သောသူတို့အဘို့ ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်များအတွက်.
ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီတောင်အာဖရိကကနေအတော်လေးကွဲပြားခြားနားပါသည်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာဥပမာအားဖြင့်ဤမျှလောက်များစွာသောရှိပါတယ် အိန္ဒိယကနေပြည်တော်ပြန်။ သူတို့ထဲကအများစုဟာကိုယ့်ကိုပိုပြီးငွေရှာဖို့သူတို့ရဲ့နေအိမ်နိုင်ငံကနေပြောင်းရွှေ့နေကြသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အဒါအကောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ မင်းကြောင့်် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာတစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးအဖြစ်။ သငျသညျကွိုးပမျးအားထုရှာဖွေသင့်ရဲ့အလုပ်ထက်နှစ်ဆဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သာယူအေအီးမရှိမေ့မထားပါနဲ့။ သင်လုပ်နိုင်သည် ဆော်ဒီအာရေဗျကုမ္ပဏီများတွင်အလုပ်ရှာတွေ့။ သငျသညျထားရှိနိုင်ပါသည်ဘယ်မှာအများအပြားကုမ္ပဏီများမှရှိပါတယ်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီရန်သင့်အားပေးလိုတဲ့အကောင်းဆုံးအကြံပြုချက်တစ်ခုမှာ။ သင်သိပါစေရန်ဖြစ်ပါသည် သငျသညျပင်လယ်ကွေ့တွင်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနိုင်သည်ကိုဘယ်လို။ တောင်မှမရှိဘဲ ဒူဘိုင်းမှရွေ့လျား သို့မဟုတ်အဘူဒါဘီ။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာဖြစ်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ cryptocurrency ကုမ္ပဏီများမှအပေါ်ရှာဖွေရေးအလုပ်အကိုင်။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, ဒီဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်တောင်အာဖရိကအလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျကိုတိုက်ရိုက်အတွက်စုဆောင်းမှုမန်နေဂျာကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်, သင့် updated CV ကိုပို့ပါ။ ထိုအခါအခြားကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူစကားပြော အလုပ်ရှာဖွေရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးအကြံပေးချက်ကို.
အရှေ့အလယ်ပိုင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့ပိုပြီးပွင့်လင်းသည်။ ကျနော်တို့အာဖရိကနဲ့ဥရောပကနှိုင်းယှဉ်အထူးသဖြင့်ပါ။ ဒူဘိုင်းမှာတော့သင်သည်တတ်နိုင် ကောင်းသောစုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီများသည်ကိုရှာဖွေရန်။ ဥပမာ, ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေတာပါကစ္စတန်ကနေလူတွေ။ ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွင်း။ ဒါကြောင့်ပြီးသားအရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင်အခြေစိုက်နေသောအခြားနိုင်ငံများနှင့်စကားပြောဆိုရန်စမတ်စိတ်ကူးဖြစ်လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီထောက်ပံ့ ဒူဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်စုဆောင်းမှု။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့အများကြီးရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒူဘိုင်းနှင့် ပတ်သက်. အချက်အလက်များ၏အပိုင်းပိုင်း။ ကျွန်တော်ယူအေအီးကိုချစ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကပစ်မှတ် 2020 ကုန်စည်ပြပွဲသို့မရောက်မှီတိုင်အောင်အဖြစ်အများအပြားကျွမ်းကျင်သူများကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှအဖြစ်ထားပါရန်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်ရိုးရိုးလူတွေကိုကူညီမေတ္တာရှင်နေကြတယ်လို့ပဲ။
အိုကေ, ယခုလက်ျာဘက်အလုပ်ရှင်ရှာတွေ့မယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီက Google ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျကောငျးမှအိုင်တီကျွမ်းကျင်မှုရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင်ကွန်ပျူတာသုံးစွဲဖို့ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းလုံလောက်စွာသိလျှင်။ သင်အလွယ်တကူလုပ်နိုင် မြင့်မားတဲ့နည်းပညာကုမ္ပဏီများနှင့်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်ယူအေအီးအတွက်ငှားရမ်းသူသုတေသနများကအချို့ကောင်းသောအလုပ်ရှင်များရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, တစ်ခုလွယ်ကူသောအလုပ်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်သင်သည်တတ်နိုင်သည်ဟုလုပ်ဖို့ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံအဘို့အကျွမ်းကျင်သူများလမ်းညွှန်များ join။ တဖန်သင်တို့အချို့ငှားရမ်းရှာတွေ့နိုင်ပါသည် ဒူဘိုင်းရှိကုမ္ပဏီများ.
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူများငှားရမ်းနေသောကောင်းသောကုမ္ပဏီများသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, သင်နေရာတိုင်းရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အကောင်းဆုံးထဲကတစ်ခု မော်တော်ကားလုပ်ငန်းငှားရမ်းကုမ္ပဏီများမှ သင်တို့သည်ငါတို့၏အလုပ် site ပေါ်တွင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်တောင်အာဖရိကအလုပ်အကိုင်များဟုတိုင်းအလုပ်ရှာဖွေသူတွေ့ရှိရန်စူပါခက်ခဲရှိပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြောစစ်မှန်တဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျအဖြစ်မှန်ပြုကြရန်ရှိသည်အားလုံးဖြစ်ပါတယ် LinkedIn ပေါ်မှာရှာတွေ့ဖို့ဘယ်လိုသိရန်.
ဥပမာအားဖြင့်, အခြားစမတ်စိတ်ကူးဖို့ဖြစ်ပါတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်လမ်းလျှောက်-in ကိုအင်တာဗျူးသွားနှင့်ဖြတ်သန်း။ တစျထောငျကိုယ်စားလှယ်လောင်းများငှားရမ်းနေသောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာအများအပြားကုမ္ပဏီများမှရှိပါတယ်။ တောင်အာဖရိကကနေညာဘက်ကိုအလုပ်ရှင်များရှာဖွေခြင်းအချိန်ကြာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ။ သငျသညျဒူဘိုင်းပြောင်းရွှေ့တဲ့အခါမှာဥပမာအားဖြင့်။ သငျသညျအလုပ်ရှင်များကိုရှာဖွေအနည်းဆုံး6လအတွင်းအချိန်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေါ့ မြို့တို့တွင်, ဒူဘိုင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ လူတိုင်းကအသက်ရှင်ဖို့ကိုချစ်နှင့်မြင့်မားသောလုပ်ခလစာကိုလုပ်လိမ့်မယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်အလုပ်အကိုင်အဘို့အစစ်မှာပါလိမ့်မည်နေကြသည်။ ဥပမာနေသောလူကြိုက်အများဆုံးတပါးအမြိုးသားတစျဦးအတှကျအ ယူအေအီးအတွက်အလုပ်လုပ်ဖိလစျကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ပါသည်။ သူတို့က ဒူဘိုင်းကူးလာ သူတို့ကျိန်းသေအလုပ်အကိုင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်သောကြီးမားသောမျှော်လင့်ချက်နှင့်အတူ။ အဖြစ်မှန်မှာတော့အများကြီးရှိပါတယ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများ သူတစ်ဦးအလုပ်ရှာဖွေမတွေ့ရှိကြသည်မဟုတ်။ သူတို့ကမလုံလောကျကြောင်းမျှော်လင့်နေကြ ဒူဘိုင်းထဲတွင်နေရာခံရဖို့.
အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, ငါတို့သည်သင်တို့အကြောင်းကြားရန်လိုအပ်ပါသည်။ အကြောင်း, လူတိုင်းမအလုပ်အကိုင်အတွေ့ တောင်အာဖရိကကနေဒူဘိုင်း၌တည်၏။ သငျသညျရှိသည်ဖို့လိုအပ်အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ် ယူအေအီးအတွက်အလုပ်ရှင်ထံမှကောင်းသောအလုပ်အကိုင်ဆည်းပူးဖို့။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်သက်သေမှတ်တမ်းများနှင့်အတူအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ထိုအကြှနျုပျတို့ရှိသမြှသောအလုပ်တစ်ခုလွယ်ကူသောအလုပ်မဟုတ်ပါငါသိ၏။ ကြောင်းအလုပ်အကိုင်ကမ်းလှမ်းမှုကိုရှာဖွေနောက်ထပ်အရာကောင်းတစ်ဦးပညာရေးပါပဲ။ ထိုမှတပါး, အကောင်းဆုံးကိုတဦးတည်းယူအေအီးမှ။ အပြုသဘောဘက်တွင် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အဘို့အကျွမ်းကျင်သူများအမျိုးသမီးတစ်ဦး အကောင်းဆုံးကိုပေးဆောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယူအေအီးအတွက်ဟိုတယ်နှင့်စားသောက်ဆောင်များကုမ္ပဏီတွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ပဲ။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, ကျွမ်းကျင်သူများအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြ ယူအေအီးအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အလုပ်အကိုင်များရှာဖွေရာတွင်.
အားလုံးအထက် ဒူဘိုင်းအတွက်ဆရာ, ဆရာမ ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အစာရှောင်ရတဲ့နေကြသည်။ ဒူဘိုင်းတက္ကသိုလ်များအားလုံးအချိန်ကိုငှားရမ်းထားပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးမြင့်ပညာရေးနှင့်အတူလူစှမျးနိုငျပါ၏ဖော်ပြအဖြစ် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်ရှင်များကိုရှာဖွေ။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ကူညီပေးနေသည်။ သင်တို့မူကား, အလုပ်ရှင်များကိုရှာဖွေခိုင်မာတဲ့အတွေ့အကြုံရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင်တို့အဘို့အအံ့သြဖွယ်လမ်းပြရှာတှေ့နိုငျ ယူအေအီးအတွက်ရှာဖွေနေအလုပ်အကိုင်နှင့်အလုပ်။ အထူးသဖြင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူများအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်တောင်အာဖရိကအလုပ်အကိုင်များသည်။
နောက်ထပ်ကဏ္ဍ ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်ငှားရမ်းသူ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်စကားပြော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဒူဘိုင်းများအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကဏ္ဍ။ အထူးသဖြင့်ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 အသစ်သောစီမံကိန်းများအတွက်။ ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများရှိအသစ်များကိုမူထူးခြားတဲ့စီမံကိန်းများကိုအများကြီးရှိပါတယ်။ နှင့်တောင်အာဖရိကအလုပ်ရှာဖွေသူများအဖြစ်သင်ကစီမံခန့်ခွဲနိုင်တယ် အလုပ်ရှာရန်.
တောင်အာဖရိကဆီကနေအဘူဒါဘီအတွက်နေရာလွတ်, အခြားတစ်ဖက်တွင်, နိုင်ငံတကာမှာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဥပမာဒီ ဒူဘိုင်းတွင်စုဆောင်းမှု site ကို နှင့် အလုပ်တစ်ခုအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီ။ သူတို့ကသင်၏ CV နှင့်အတူလျှောက်ထားရန်ကယ့်ကိုထိုက်တန်ဖြစ်ကြသည်။
တစ်ဦးကိုရှာပါ ဒူဘိုင်းယောဘ? အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုသင်ရရှိနိုင်သည်။ ရိုးရိုး တစ်ဦးကိုစတင်ရန် အသစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဒူဘိုင်း!
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယခုကိုလည်းပေး ကူဝိတ်အတွက်ဂျော့ဘ်ဘို့အကောင်းတစ်လမ်းညွှန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများအဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူ သငျသညျယခု Sharjah အတွက်လမ်းပြရနိုင်တယ်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူညီညွတ်သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်။